मोबाइल, फेसबुक हुँदा र नहुँदाको लभ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
फागुन ३, २०७६ शनिबार ७:५०:२१ | मिलन तिमिल्सिना
प्रेम दिवस मनाउन व्यस्त एक किशोरी गिफ्ट पसलमा पुगिन् ।
पसलेसँग सोधिन् : साहुजी ‘तिमी नै मेरो पहिलो र अन्तिम प्रेम’ लेखिएको कार्ड पाइन्छ ?
पसलेले भने : पाइन्छ ।
किशोरीले सोधिन् : एउटाको कति पैसा ?
पसलेले भने : ५० रुपैयाँ ।
किशोरीले भनिन् : १५ वटा दिनुस्, न ६ सयमा ।
चुट्किला होइन, भएकै घटना यो । फेसबुक र मोबाइल आइसकेपछि विकसित भएको प्रेमको रुप । फेसबुक र मोबाइल त एक, दुईजनासँग मात्र सीमित हुँदैन । धेरै जनासँग हुन्छ । त्यसैले प्रेम पनि एक दुई जनामा सीमित हुने कुरा भएन ।
यति मात्र हो र ! फेसबुकले श्रीमान श्रीमतीलाई पनि भ्यालेन्टाइन डे मनाउन बाध्य पारेको छ । मन अर्कोतिर भए पनि बाध्यताले बुढाबुढीको फोटो राखेर ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे भन्नेहरु धेरै देखिए ।
एकदिन अर्धवार्षिक परीक्षामा लेख्दालेख्दै सीताको डटपेनमा मसी सकियो । रामले मौकामा काम लाग्छ भनेर अर्को डटपेन पनि बोकिरहन्थ्यो । सँगै परीक्षा दिइरहेकी सीताको डटपेनको मसी सकिएपछि उसले हत्तपत्त आफ्नो डटपेन दियो । त्यो दिनको जाँच सकिँदा सीतालाइ राम मन पर्न थाल्यो । दुवैको लभ पर्‍याे ।
अघिल्लो हप्ताभर ठिटाठिटीदेखि पाका मान्छेहरु पनि यसैगरी देखावटी लभमा रमाए । मोबाइलमा मेसेज तथा फेसबुकमा फेस हेरेर र देखाएर लभ सप्ताह मनाए । रोज डेदेखि किस डेसम्म भन्दै बुरुकबुरुक गरे । कसैकसैले साँच्चै मनाए, धेरैले चाहिँ फेसबुकमा लेखेर हेरेरै चित्त बुझाए । फेब्रुअरी १४ सकियो, फेसबुके लभ र बुरुकबुरुक पनि सकियो ।
फेसबुक र मोबाइल छ्यासछ्यास्ती भएपछि लभ पनि खहरे खोलाजस्तै केही दिनको खैलाबैलामै सीमित हुन थालेको छ । पहिले फेसबुक र मोबाइल नहुँदाको लभ खहरे खोलाजस्तो होइन, शान्त समुद्रजस्तो हुन्थ्यो । त्योबेला फेसबुकमा लेखेर र मोबाइलमा भनेर होइन, आफैं लभ पथ्र्यो । जुन टिकाउ र भरपर्दो हुन्थ्यो ।
पहिले गाउँमा मेलापात, जात्रामात्रा, गोठालो जाँदा लभ पथ्र्यो । छिमेकका सँगसँगै गोठालो जाँदा कहिले यसको बाख्रा हराउँथ्यो, कहिले उसको गाई हराउँथ्यो । हराएका गाईबाख्रा खोज्न हारगुहार गर्नुपर्दथ्यो ।
तल्लो घरकी च्याण्टी वनमा घाँस काट्न जाँदा रुख चढ्न सक्दिन थिई । माथ्लाघरे प्याण्टेले घाँस झारिदिन्थ्यो । घाँसदाउरा, गाईगोठालो र वनपाखा जाँदाजाँदै प्याण्टे र च्याण्टीको माया पिरिम झाँगिन्थ्यो ।
स्कुलमा राम र सीता एउटै कक्षामा पढ्थे । रामलाई सीता मन पर्ने, सीता वास्ता नगर्ने । एकदिन अर्धवार्षिक परीक्षामा लेख्दालेख्दै सीताको डटपेनमा मसी सकियो । रामले मौकामा काम लाग्छ भनेर अर्को डटपेन पनि बोकिरहन्थ्यो । सँगै परीक्षा दिइरहेकी सीताको डटपेनको मसी सकिएपछि उसले हत्तपत्त आफ्नो डटपेन दियो । त्यो दिनको जाँच सकिँदा सीतालाइ राम मन पर्न थाल्यो । दुवैको लभ पर्यो ।
लभ पर्न केही न केही त जुर्नुपर्यो । कि मन मिल्नुपर्याे । दुवैले दुवैलाई मन पराउनुपर्यो । तर दुवैलाई दुवैले मन पराउने दोहोरो भन्दा एकोहोरो लभ धेरै हुन्छ । आफूलाई उ मन परेको हुन्छ । तर उसले बालमतलव दिने होइन । उसलाई पट्याउन, उनलाई फकाउन मरिहत्ते गरेर लाग्यो । कहिले बाटोमा कुरेर बस्यो । कहिले पँधेरामा सँगै गयो । कहिले किताब माग्यो, कहिले नोट माग्यो । कहिले कलम दियो, कहिले कलम माग्यो । कहिले खाजा दियो, तै पनि बालमतलब दिने होइन । तर कसरी कसरी कोहीसँग लभ चाहिँ परिहाल्छ ।
लभ पर्दैन भन्दा पनि कहिलेकाहीँ लभ पर्छ । कहिले चाहिँ लभ परोस भनेर अनेक जुक्ति लगायो, तै पनि पर्दैन ।
उबेला जमाना अर्कै थियो । कक्षाभित्र केटाकेटी एउटै बेन्चमा बस्न पाईंदैनथियो । केटाका लागि छुट्टै बेञ्च । केटीका लागि छुट्टै बेञ्च । कहिलेकाहीँ छुस्स छोइहाल्यो भने पनि झस्कनुपर्ने । हात मिलाउन त के छुन समेत पाईंदैनथियो ।
स्वास्थ्य पढाउने सरले प्रजनन स्वास्थ्यको कुरा पढाउँदैनथिए । घरमा आफैं पढ्नु भन्थे । केटाले केटीलाई र केटीले केटालाई हेर्न समेत पाईंदैन थियो । गोठालो जाँदा मन परेको छिमेकीसँग यसो कुरा गरेको वल्लोघरे पल्लो घरेले देखे भने पनि पँधेरोमा कुरा काट्ने मसला बनाउँथे ।
अहिले त ठिटाठिटी मोबाइलमै लभ गर्छन् । मोबाइलबाट फोन र एसएमएस गर्छन्, च्याट गर्छन् । कसैले त अनुहार नै नदेखी एसएमएस र फोन गरेर लभ गर्छन् । मोबाइलबाट गफ गर्दासम्म निकै राम्रो । उजस्तो सन्सारमा अरु कोही छैन जस्तो लाग्ने । जब भेट्न गयो, त्यसपछि छाँगाबाट खसेजस्तो । के सोचें पहिले के भयो अहिले ! के देखें पहिले, के देखियो अहिले ! देख्दै नदेखि मोवाइल लभ गरेपछि परिंदैन त फन्दामा !
पहिले पहिलेको लभ पो लभ । मान्छे प्रत्यक्ष देखेपछि मन पर्न थाल्थ्यो । अनि फ्याट्टै कुरा गर्न नसक्दा लभ लेटर लेखिन्थ्यो । चिल्लो कागजको पानामा फूलबुट्टा भरेर, साहित्य सृजना गरेर तौली तौली अक्षर कोर्दै लभ लेटर लेख्नु र पठाउनुको मज्जा बेग्लै हुन्थ्यो ।
पहिले आई लभ यू माइ डिएर, आकाशको तारा झारिदिन्छु, आकाश र धरती जोडिदिन्छु भनेर कति भाँती र्पुयाएर लम्बेतान लेख्थे । अहिले त आई एल यू । मिस यू । डार्लिङ भनेर छोटोछोटो लेख्छन् । केटीहरुका लुगा छोटिएझैँ लभ गर्ने वाक्य र शब्द छोटिन थाल्यो ।
लभलेटर पाउनेलाई पनि उत्तिकै मज्जा । आहा क्या सुन्दर अक्षर । क्या मीठो भाषा र शैली । यस्तो अक्षर लेख्ने हात कस्तो होला ? यस्तो भाषा र शैली लेख्ने भावना कस्तो होला ? अन्त कतै नगई त्यही अक्षर हेरिरहुँ, पढिरहुँ जस्तो । सिरानमुनी, कुन्तुरमुनी, खाटमुनी लुकाइलुकाई बेलाबेला पल्टाएर हेरिरहुँ जस्तो लाग्ने लभलेटर । १० वर्ष, २० वर्ष, ४० वर्षअघिसम्ममा लभलेटर सुरक्षित गरेर राखेका हुन्छन् बुढाबुढीले समेत । त्यति धेरै महत्वको छ लभलेटर !
यति धेरै महत्व बोक्ने लभलेटरलाई मोबाइलले खाइदियो । हिजोआज लभलेटर लेख्ने चलन नै हरायो । मोबाइलमा दुई अक्षरको हाइ, तीन शब्दको आइ लभ यू र सेम टु यु, बाबा, माया भन्ने बाहेक लेख्ने काम कता पुग्यो कता । मोबाइलबाट फेद न टुप्पोको संवाद भन्दा लभलेटरमा भाँती पुर्याई पुर्याई लेखिने अक्षर, शब्द र सायरी नै लोभलाग्दा हुन्थे ।
वर्षौं वर्षसम्म मान्छेले जतन गरेर राख्थे । अर्कैसँग विवाह भएर छोराछोरी भैसक्दा पनि लभलेटर पठाउने अर्कैको सम्झनामा घरीघरी हेरेर टोलाउँथे ।
तर मोबाइल र फेसबुक आएपछि लभलेटर हरायो । लभलेटर लेख्ने जाँगर हरायो । मायाका घतलाग्दा र खँदिला शब्द हराए ।
मोबाइल र फेसबुकको चलन बढ्दा लभलेटरको अस्तित्व घट्यो । मान्छेको जाँगर घट्यो । शब्द र अक्षर घट्यो । लभको स्वाद घट्यो । पहिले मान्छे चिनजान र देखादेख भएपछि लभलेटर बन्थ्यो । अहिले त मान्छे नै चिनजान नहुँदै र नदेख्दै मोबाइलमा लभ पर्छ । अपुरो लभ, उतिखेरै भत्किन्छ । लभ मात्र होइन, कतिका त घर नै टुट्छ । अर्को भ्यालेन्टाइन डेसम्म अझ के के हुने हो ।
भारतमा मुस्लिम समुदायको 'तबलीगी जमात'मा सहभागी भएर फर्किँदै...
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा बहराइनमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे जान...
'लकडाउन' काे माैका छाेपी तस्करी गर्न बर्दिया निकुञ्ज प्रवेश गर्...
दाङमा कोरोना परीक्षण गरिएका सबैको रिपोर्ट ‘नेगेटिभ'
कोरोना कहर : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्ग...
चीनमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएकाहरुको सम्झनामा तीन मिनेट म...
एनआईसी एसिया : अनलाइन खाता खोलेर पहिलो मोबाइल बैंकिङ कार...
नेपालमा थप तीन जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखियाे
एनआरएनए कोरियाले चार हजार किट्स नेपाल पठाउने
कोरोना सङ्क्रमितको उपचारको लागि रुकुममा तयार भयो अस्थायी अस्पताल
भारतमा पहिलो पटक हुन लागेको यू–१७ महिला फुटबल विश्व कप अनि...